25inch 10 iimbambo ubungakanani enkulu engangenwa ngumoya oluzenzekelayo 3 isambrela
Ngobukhulu obukhulu be-25inch 10 iimbambo ezilungele abantu ababini ukuya kwabathathu ukuba bazisebenzise, ​​ilaphu le-pongee elingangenwa manzi kunye neembambo ze-fiberglass ezingangeni moya zenza eziambrela zomelele ngakumbi.
Into NO.: OV33002
Isayizi enkulu ngokuzenzekelayo ivule kwaye ivale i-3 fold ambrela.
Iimbambo ezili-10 kunye neembambo ze-fiberglass zenza le sambrela yomelele ngakumbi.
Iqhosha lokuvula elizenzekelayo elinelaphu le-pongee elingangenwa manzi.
Iambrela yoyilo olwenziweyo, kunye nobukhulu obukhulu bomtya oguqukayo.
Sebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu nokuseka inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, njengokusayina abantu abathile abaphethe inkqubela phambili yemveliso nganye ukusuka ekuthengweni kwemathiriyeli eluhlaza ukuya kwindibano. Inkampani iyipasile i-BSCI yaseYurophu kunye nolunye uqinisekiso lwenkqubo yoxanduva lwentlalo kunye ne-ISO 9000 yeziqinisekiso zenkqubo esemgangathweni yamanye amazwe.
R & D umthamo:
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava okuvelisa, iseke ubudlelwane beshishini lwexesha elide kunye nabathengi baseYurophu ukulungiselela ulwenziwo oluphambili Sinokubonelela ngemveliso ye-OEM kunye ne-ODM
Abathengi bethu abaphambili baseJamani, eSpain, e-Itali, nakwamanye amazwe aseYurophu Iimveliso zithunyelwa eYurophu, eUnited States, eMzantsi-mpuma Asia nakwamanye amazwe nakwimimandla, kwaye ziyaziwa kwishishini leambrela.
Egqithileyo Super mini pocket pocket imilo 5 hlamba isambrela
Okulandelayo: I-umbrella evulekileyo ngokuzenzekelayo ezi-3 ngokuzenzekelayo
Isonge Umbrella oZenzekelayo
Ukusonga ukuguqula i-Umbrella
Iambrela eflethi 3 Ukusonga
Iambrela 3 Ukusonga
Ovida ezintathu ukusonga Auto Vula Auto Vala Mini W ...
Ovida 3 Songa oluzenzekelayo evulekileyo isakhelo zingangenwa Ful ...
I-Ovida 3 fold ngokuzenzekelayo I-Umbrella evulekileyo yomoya ...
Ovida 3 ulusu Auto oluzenzekelayo ukuvala Windproof Windproof ...
Isambrela esenzelwe wena, Umbrella wemvula, Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Isambrela esisesikweni, Ukusongelwa kwangaphandle, Iisambrela zesiko lesiqhelo,